Booliska Kenya oo baadigoobaya nin looga shakiayay Al-shabaab oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Germany – Radio Daljir
Nairobi, May 12 – Booliska dalka Kenya ayaa soo bandhigay muuqaalka nin ajnabi ah oo u dhashay dalka Germny oo siffo sharci darro ah ku jooga dalka Kenya.
Taliye xigeenka booliska Kenya Charles Owino ayaa sheegay, Khaalid Axmed oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Jarmalka inuu xiriir la leeyahay Al-shabaab islamar ahaantaana uu wax badan ka ogyahay weerarada kadhaca dalka Kenya.
Waxaa uu kacodsaday shacabka inay booliska ku wargeliyaan hadii ay arkaan meesha ninkan Al-shabaab looga shakinsanyahay uu joogo.
Dowladda Kenya ayaa dagaal kula jirta Al-shabaab, iyadoona sheegtay inay falal amni darro ah ay ka fuliyeen gudaha wadankeeda.
Maxamed Xaaji Abuukar
Nairobi, Kenya. http://daljir.com/